3.‎3 FUNDA LENDATSHANA
Kukhona inqubo ye-Scientology eyaziwa nge THATHA UHAMBO.
Lenqubo kulula kakhulu ukuyenza.
Lapho uzizwa ukhathele ngemuva kokuqeda umsebenzi wakho—noma ngabe umcabango wokwenza kanjalo cishe konke ongakwazi ukukwenza ngaphandle kokuwela phansi—kufanele uphume uhambe uzungeze ibhlokhi uze uzizwe uphumule.
Kufanele uhambe uzungeze ibhlokhi ubheke izinto uze ubone izinto odlula kuzo. Akunandaba ukuthi uhamba kangakanani ebhlokini; vele uqhubeke uzungeze ibhlokhi uze uzizwe ungcono.
Ngokwenza lokhu, uzothola ukuthi uzoba nokukhanya ekuqaleni bese ukhathala kakhulu. Uzokhathala kangangokuba “wazi” manje ukuthi kufanele uyolala ulale ubuthongo obuhle ebusuku. Kepha lesi akusona isikhathi sokuyeka ukuhamba, ngoba uhamba ngokusebenzisa ukukhathala. Eqinisweni, wenza ukukhathala kudlule ngokuhamba, kepha awukaqedi. Awusingathi ukukhathala ngokuzivocavoca umzimba. Ukuzivocavoca umzimba bekulokhu kubonakala kuyinto ebaluleke kakhulu kubantu, kodwa ukuvocavoca umzimba akubalulekile. Okubalulekile isenzo sokususa ukunaka kwakho emsebenzini wakho bese ukubeka ezintweni ezikuzungezile emhlabeni ophila kuwo.
Ukuhamba uzungeze ibhlokhi nokubheka izakhiwo kuzokwenza uzizwe ulula futhi ujabulile. Lapho usukhathele kangangokuba awusakwazi ukuzihudula nje, noma ukhathele kangangokuba awukwazi ukuphumula nhlobo, empeleni kuyadingeka ukuthi uphume ubheke ubone izindlu, izakhiwo, uthango, imigwaqo, izimoto, izihlahla, njll.
Ngokwemvelo, kunomkhawulo kule nqubo. Angeke usebenze usuku lonke futhi uzungeze indawo yonke ubusuku bonke bese usebenza usuku olulandelayo futhi ulindele ukuzizwa ukhululekile. Kepha kufanele uchithe isikhathi esithile uzikhulula emva kokuqonda usuku lonke.
Inqubo yokuThatha Uhambo ingalapha cishe noma yini.
Uma uzizwa uthukuthelele unkosikazi wakho, phuma uhambe uzungeze ibhlokhi uze uzizwe ungcono bese naye umenze ahambe ibhlokhi ephambene ebheke ngaphesheya kuze kube yilapho inkinga ixazululwa. Kutholakale ukuthi zonke izingxabano ezikhona ekhaya, ikakhulukazi phakathi kwabantu abasebenzayo, zenzeka ngoba abantu abathintekayo babheke kakhulu ezintweni nasezikhaleni zomsebenzi wabo. Omunye angahluleka ukulawula izinto ezithile endaweni asebenzela kuyo. Ube esefika ekhaya ezame ukuthola okuthile angakwazi ukukulawula. Ngokuvamile lokhu kuba kungumlingani womshado noma yizingane. Futhi lapho umuntu ocasukile ehluleka ngisho nokulawula unkosikazi noma izingane, uba nenkani futhi abemuncu.
I-Extroversion yokunaka inesidingo njengomsebenzi uqobo. Akukho lutho olungahambi kahle ngokunaka okungenisiwe noma ngomsebenzi. Uma ubengenayo into onentshisekelo kuyo, uzoba izingcezu ngokuphelele. Kepha uma usebenza, kuzotholakala ukuthi ukukhathala okungekhona okungokwemvelo kungenzeka. Lapho lokhu kutholakala kunjalo, khona-ke impendulo akuyona ukuthi “yehla ekuqulekeni” amahora ambalwa—njengasebuthongweni—kodwa empeleni ukukhulisa ukunaka kwakho bese ulala uphumule ngempela. Izinto eziningi zingenzeka lapho ulandela imithetho nemithetho ye-introversion ne-extroversion. Futhi yize inqubo yokuThatha Uhambo ilula kakhulu kangangokuba icishe ihlekeke, izobhekelela ubunzima obukhulu obuhambisana nomsebenzi.
Khumbula ukuthi, lapho wenza lenqubo, uzokhathala ngokwengeziwe ekuqaleni, kepha uyozizwa ulula, ujabule futhi unamandla ngokwengeziwe.